06/01/2012 - 07/01/2012 | အိမ့်မှူးသော်
ကျွန်တော်ဖတ်မိသော စာအုပ်မှ နှစ်သက်သော စာစုလေးများကို တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Yesterday is onlyadream, tomorrow is onlyavision , but today is life .
အတွေးအခေါ် နှင့် ဘ၀ကို ပတ်ဝန်းကျင်က ပြုပြင်ပေးသည်။
Environment influence one'e mode of life and thought.
အသုံးမ၀င်သော အသက်ရှည်ခြင်းသည် စောစော သေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
A uneless life is an early death.
ဘ၀ဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်သော်လည်း ရုန်းကန်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
Life is nothing butastruggle .
ပျင်းရိခြင်းသည် အသက်ရှင်နေသူအား(ဘ၀အား) သဂျြိင်္လ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Lazy isaburial ofaliving man.
အသက်ရှင်နေသရွေ့ ဘယ်လိုနေထိုင်ရမည်ကို အမြဲ လေ့လာဆည်းပူးနေပါ။
အသက်ရှင်ခြင်း(ဘ၀) ဟူသည် တိုက်ပွဲပင်ဖြစ်သည်။
To live is to do battle .
အချစ်သည် သူ့အလိုအလျောက်ပေး၏။ ၀ယ်ယူလို့ မရပေ။
Love gives itself ,it is not bouhgt.
အချစ် နှင့် ချောင်းဆိုးခြင်းကို ဖုံးကွယ်ထားလို့မရပေ။
Love and cough can not be hid. ( ဖုံးကွယ် ထားရင် ပိုဆိုးတယ် ဟုတ် ...:) )
ဘ၀သည် ပန်းဖြစ်ပြီး အချစ်သည် ၀တ်ရည်ဖြစ်ပေသည်။
ဘ၀၏ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ အကောင်းဆုံးမှာ အချစ်ပင်တည်း။
Love is blind . (ချစ်နေသောကြောင့် အပြစ်မမြင်ခြင်း ဖြစ်မည်ထင်၏...:P)
အချစ်စစ် အချစ်မှန်သည် ဘယ်သောအခါမှ မဟောင်းနွမ်းပေ။
Ture love never grows old .
အချစ်သည် ကမ္ဘာကြီးကို တည်ဆောက်ထားသည်။
Love made the world . ( မှန်၏ ကျွန်တော့် ကမ္ဘာကြီးပေါ့.....:P )
အချစ်သည် အရာရာကိုအောင်နိုင်၏ ။
Love conqueror all things.
ကျွန်ုပ်သည် အရူးဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ကောင်းတာမှန်သမျှကို ချစ်၏။
I amafool anything that is good .
စောစီးစွာ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် အချစ်တာရှည်၏။
Early marriage ,long live.
Old love does not rust. (ငယ်ကအချစ် အနှစ်တစ်ရာ မမေ့သာ )
ဒေါသသည် မိုက်မဲမှုဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး နောင်တရရှိခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်သည်။
A short tempered person's speech is short.
While the fire is raging, water can do nothing.
ဒေါသဖြစ်နေသူသည် သူ၏မျက်စိကိုပိတ်ထားပြီး သူ၏ပါးစပ်ကိုပိတ်ထာ၏။
ဒေါသကို ကုစားဖို့ရာ အကြီးမားဆုံး သောနည်းလမ်း ကား အချိန်ဆွဲထားရန်ပင်ဖြစ်သည်။
The gratest for anger is delay.
ဒေါသဖြစ်ခြင်းသည် ခေတ္တခဏ ရူးသွပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
လူတစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်ခြင်းသည် မချမ်းသာရသော်လည်း အသိပညာတိုးပွားလာလေသည်။
Advesity makesaman wise , not rich.
ကြံသာ အစဉ်ချိုသည်၊ လူ သည် အစဉ်မချို။
Only sugar-cane is always sweet , not man.
တောင်ထိပ်ရောက်သောသူတိုင်း အောက်က တက်၏။
Whoever has reached the peak , had to begin the climb at the foot of the hill.
The man who hesitates is lost.
လူတစ်ယောက်သည် ပျော်ရွှင်နေသောအခါ နာရီထိုးသံပင် မကြားပေ။
Whenaman happy he does not hear the clock strike.( နာရီထိုးသံမပြောနဲ့ ဗုံးကြဲတာတောင် ကြားမှမဟုတ်ဘူး....:) )
လူကြီးနှင့်လူငယ်သည် ဘယ်တော့မှ သဘောထားခြင်းတိုက်ဆိုင်မည် မဟုတ်။
Youth and age will never agree.(May be sometime )
ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာ Ariesက မေမေဆီပြေးလာပြီး "မေမေ... မေမေ ဒီနေ့ အောင်အောင်နဲ့ဒါန်းစီးပြိုင်တာ သမီးနိုင်တယ်"
Aries "သမီး ဒီလောက်မအပါဘူး မေမေရဲ့၊ အတွင်းခံကို သူမမြင်အောင်
ချွတ်ထားပြီးမှ ဒါန်းစီးတာပါ" :cd
ရေဆာနေတဲ့ Taurus " အတော်ပဲ... ကျွန်တော့်ကို မချိုတာပေးပါ" :cd
(Taurusဖွားက အိမ်၊ မိသားစုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သူ ဘေးချော်ချင်သည့်တိုင် ကိုယ့်ကိုကာကွယ်တတ်သူဖြစ်တယ်)
Gemini "အာ..... မေမေကလဲ! ကြက်ဖတွန်ရင် တွန်ပစေပေါ့။ သမီးက ကြက်မမှမဟုတ်တာ" :cd
(Gemini ဖွားက ကိုယ့်ကို သိတတ်လိုစိတ်၊ ကိုယ်ပိုင်တွေးတောစိတ် ပြင်းထန်သူဖြစ်တယ်)
Cancer "ဖေဖေနဲ့ ပေးအိပ်လိုက်မယ်" :cd
Leo "မေမေ.. မေမေ... တင်ပါးထဲမှာ အီးတွေနဲ့...."
(Leoဖွားက ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့ ဘေးလူရဲ့အကြည့်၊ အပြောကို သိပ်ဂရုမစိုက်တတ်သူဖြစ်တယ်)
ဖေဖေက "ချက်ကြိုးက ကလေးငယ်ကို မိခင်နဲ့ဆက်ထားပေးတယ်။ မိခင်ဝမ်းတွင်းက ခွါတာနဲ့ ဆရာဝန်က ချက်ကြိုးကိုဖြတ်ပြီး အထုံးထုံးပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ချက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်" လို့ အတိုချုံးရှင်းပြလိုက်တယ်။
ကျန်တစ်ယောက်ကို သားကျောင်းမသွားချင်တဲ့နေ့မှ ထပ်ပြောမယ်" :cd
ပြောပြောဆိုဆို အိပ်ခန်းထဲကနေ Scorpioထွက်သွားပြီး
တံခါးကိုသော့ခတ်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ အားရကျေနပ်ဟန်နဲ့---
ဖေဖေ "............" :cd
ပြေးပြေး.. ရှေ့ကိုပြေး!" လို့ပြောတော့ Capricornက တုံ့နှေးနှေးနဲ့
"ရှေ့မှာ မိုးမရွာလို့လား?" တဲ့။ :cd
(Capricorn ဖွားက အမှန်ကိုသိပေမယ့် လိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ပျင်းရိသူဖြစ်တယ်)
(Piscesဖွားက ကိုယ်ချင်းစာ၊ အကြင်နာစိတ်ရှိပေမယ့် အခြေအနေကို မခွဲခြားတတ်သူဖြစ်တယ်)
***၁၂ရာသီဖွားတွေမှာ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေ ဒီထက်မကရှိကြပါတယ်။ အင်တာနက်မှာရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာရေးထားတာက တချို့တလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁၂)ရာသီခွင်ဟာသလို့ ဆိုထားပေမယ့် တချို့က သိပ်မရယ်ရပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာပြန် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
၁။ အရင်ဆုံး Run Box မှာ regedit ဟု ရိုက်ပါ။ နောက်ထပ် Box အရှည်တစ်ခုပေါ်လာပါ့မယ်။
၂။ HKEY_LOCAL-MACHINE\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Uninstall အောက်ရှိ မိမိ Uninstall လုပ်ချင်သော Software ကို Click လုပ်ပါ။
၃။ ညာဘက်ရှိ Box ထဲတွင် UninstallString file အား Double Click ပါ။ Value Data: အောက်ရှိ Box တွင် C:\_Program Files\_WordWeb\_uninst.exe ကို Copy လုပ်ပြီး OK ပေးပါ။
၄။ ပြီးရင် Run Box ထဲတွင် C:\_Program Files\_WordWeb\_uninst.exe ကို Paste လုပ်ပြီး OK ပေးပါ။ Uninstall အား ပုံမှန်အတိုင်း အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဒီပို့စ်လေးတင်လိုိ့ ရိုင်းတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ ကျန်းမာရေးရှူ့ထောင့်ကနေကြည့်ပေးပါ။
သိသင့်သည်ဟုထင်သော အမျိုးသမီးရောဂါတစ်ခု အကြောင်းတင်ပြပါမည်။ ဆေးပညာအားဖြင့် CA Cervix သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာလို့ခေါ်ပါတယ်
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသည် အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်ပွား သောရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီးတော့ မဖြစ်ခင်က ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သောရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ Human Papilloma Virus (HPV) ဟုခေါ်သော virus တစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ရပြီး ကူးစက်မှု၏ ၇၀%သည် ပိုးရှိသူအမျိုးသားများနှင့် အတူနေမိမှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်များသူများ၊ မီးဖွားမှုများသူများ၊ အပျော်အပါးများသူမျာ၊ အပျော်အပါးများသောအိမ်ထောင်ဖက်ရှိသူအမျိုးသမီးများ နှင့် ပဋိသန္ဓေတားရန် အမျိုးသား အကာအကွယ်မသုံးပဲ ဆေးစားသူများ တို့ မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီး ဘယ်နှစ်ဦးက မိမိတို့ရဲ့ အမျိုးသားက သူ့ဘ၀မှာမိမိသာလျှင် တစ်ဦးတည်းသော အဖော်ဖြစ်ပါတယ်လို့အာမခံနိုင်တဲ့သူ ရှိသလဲ။ ဘယ်နှစ်ယောက် ကကော မိမိတို့ လက်ထပ်မဲ့ အမျိုးသားက အရင်ကဘာအပျော်အပါးမှ မလိုက်စားပါဘူး ဒီ ပိုးမရှိပါဘူးလို့ အာမခံနိုင်သလဲ။ စာရေးသူ ကလဲ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါ။ ယောက်ျားမကောင်းကြောင်းရေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သိသင့်တယ်ထင်တာ ဆန်းစစ်သင့်တာလေးတွေကို ထောက်ပြနေတာပါ။
ကဲ ဟုတ်ပြီ။ ဒါဆိုရင် ဘယ်သူမဆို ဒီကင်ဆာရောဂါ တော့ဖြစ်ချင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီကင်ဆာရောဂါ ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဆိုတော့ ပိုးဝင်သွားရင် ဒီပိုးက အရမ်းသေးတယ်။ အဆ သိန်းသန်းမက ချဲ့ထားတဲ့ အနုကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့မှ မြင်ရမှာ။ သူက ဆဲလ်ထဲကိုဝင်တယ် ပြီးရင်ဆဲလ်တွေက ပွားလာတယ်။ သားအိမ်ရဲ့ ထိပ်ဝမှာ မှိုပွင့်လိုကားကား အနာကြီးဖြစ်လာတယ်။ ပြီးရင် သားအိမ်တွေရောသားမွေးလမ်းကြောင်းကိုရော တစ်ကိုယ်လုံးကိုပါပြန့်သွားတယ်။
ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ဒီကင်ဆာဖြစ်တော့မယ်ဆို၇င် သူက အဆင့်လေးတွေနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်။ လက္ခဏာတွေကတော့ သွေးတွေဆင်းလာတယ်။ ပုံမှန်ဓမ္မတာလာတာနဲ့မှားတတ်တယ်။ သူကတော့ အကြာကြီးကိုဆက်ဖြစ်နေတာ။ ပြီးတော့ သံဝါသပြုပြီးနောက်ရော ဆီးသွားတဲ့အခါ အညစ်အကြေးစွန့်တဲ့အခါ မျိုးတွေမှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုသွေးတွေဆင်းလာတယ် ပြီးတော့ သားမွေးလမ်းကြောင်းကနေ သွေးမျှင်တန်းလေးတွေ နံတဲ့အချွဲတွေပါ ဆင်းလာတတ်တယ်။ ပြီးရင်နာလာတယ်။ နာတဲ့အခါမှာလည်း ယောနိဝကနေ အပေါ်ကိုဒေါင်လိုက် နာတာကပြန့်တက်လာတယ်။ နောက်တော့ ခါးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး နာလာတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဆီး ၀မ်းမထိန်းနိုင်တော့တာတွေ နဲ့ ဆီးအိတ်နဲ့ အစာဟောင်းအိမ်တွေမှာပါ အနာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ လူလည်းပိန်လာတယ်။ အနာတွေကနေပိုးတွေဝင်လာပြီး သွေးထဲမှာ အဆိပ်သင့်ပြီး ရှော့ရတတ်တယ်။ ပိုးတွေဝင်လာတာဟာ ဆီးပြွန်ကိုရောက်လာပြီး ကျောက်ကပ်ကိုပါပျက်စီးနိုင်တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားကိုမြင့်တင်နိုင်အောင် ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့သားဖွားမီးယပ်ဆရာမကြီးတစ်ဦးထံမှာ သုံးကြိမ်ထိုးရမယ်။ ပထမလထိုးပြီးရင် နောက်တစ်လနေရင်တစ်ခါထိုးမယ်။ နောက်ခြောက်လနေရင်နောက်ဆုံးအကြိမ်ထိုးမယ်။ ကဒ်ပြားလေးတွေပေးတယ်။ နောက်ထပ်ထိုးရမဲ့ ရက်ကိုရေးပေးထားတယ်။ မပျောက်အောင်တော့သိမ်းထား။ အဲသည်လိုထိုးပြီးပြီဆိုရင် ရှစ်နှစ်အထိခံတယ်။ ဟုတ်ပြီ ဘယ်တော့က စ ထိုးကြမလဲ။ နိုင်ငံခြားမှာတော့ ၉နှစ်ကစပြီးထိုးကြတယ်။ ဒီမှာကတော့ အဲဒီလောက်မလိုသေးပါဘူး။ အပျိုဖော်ဝင်စလောက်ကဆိုရပါတယ်
ရောဂါရှိမရှိစစ်ကြည့်လို့ရတယ်။ မ်ိန်းမကိုယ်ထဲကို ပစ္စည်းလေးထည့်ပြီး အသားစအဖြေထုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်တော်တော်များများ အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ အမျိုးသမီးများက ကြောက်ကြတယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုပစ္စည်းထည့်ပြီးယူ၇မှာ ကိုမကြိုက်ကြဘူး။ တကယ်တော့ သုံးနှစ်တစ်ခါ ယူသင့်တယ်။ စစ်ကြည့်သင့်တယ်။ ပိုးဝင်လာပြီဆိုရင်စောစောစီးစီး သ်ိရင်တားလို့ရသေးတယ်။ CIN 1,2,3ဆိုပြီးတော့အဆင့်သုံးဆင့်မှာ မှာ 1ဆို ကာကွယ်ဆေးလောက်နဲ့တားလို့ရသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ ကုရတော့မယ်။ ပိုးဝင်ပြီး လပိုင်းလောက်ဆို ကာကွယ်ဆေးနဲ့ရသေးတယ်။
ဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုလှီးထုတ်တယ်။ ဓာတ်ကင်တယ်။ ဆေးကျွေးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာဖြစ်တာ ကြာသွားလို့ အရမ်းဆိုးသွားရင်တော့ သားအိမ်တစ်ခုလုံးထုတ်လိုက်ရတာတို့ ပေါင်က အကျိတ်တွေကိုပါ လှီးထုတ်လိုက်ရတာတို့ လုပ်ရတယ်။
ပေးတာကတော့ ထိုးဆေးရော သောက်ဆေးရောပေါ့ အသုံးများတဲ့ဆေးတွေကတော့ Cyclophosphamine ၁၀ရက်စာ(ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အလိုက်သောက်သုံးရန်တွက်ချက်ရသည်) Lomustine နေ့စဉ်သောက်သုံးရန် (ခန္ဓာကိုယ်အကြီးအသေးအရွယ်အစားအလိုက် တွက်ချက်သောက်သုံးရသောဆေးဖြစ်သည်။)
ဓမ္မတာမမှန်တာ အထူးသဖြင့်သွေးဆုံးကာနီး အမျိူးသမီးတွေမှာနဲ့ဆင်မှားတတ်တယ်။ သားအိမ်ထိပ်ဝမှာ သံဝါသပြုပြီးနောက်တို့ သားအိမ်အတွင်းမှာပဲသွေးဆင်းတာတို့ဖြစ်ပြီး သားအိမ်ထိပ်ဝမှာ အနာတရစုတ်ပြဲသွားတဲ့အခါ။ သားခဏခဏလျှောတတ်တဲ့သူတွေမှာ ပိုးဝင်တာ။ ကာလသာရောဂါမှာ ရတတ်တဲ့အနာ။ တီဘီပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနာ။ အခြားသောသားအိမ်ထိပ်ဝမှ သွေးယိုစိမ့်စေသည့်အနာများ။
အထက်မှာပြထားတဲ့ လက္ခဏာ တစ်ခုခုပေါ်လာတဲ့အခါ အချိန်အခါမဟုတ်ဘဲ သွေးဆင်းလာတာ ၀မ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း ချက်အောက်တည့်တည့်ကနာလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သံသယ ရှိတဲ့အခါ ultra-sound ရိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ပိုသေချာအောင် အသားစ အဖြေယူရပါမယ်။ မရှိသေးဘူးဆိုရင် ကာကွယ်ဆေးသုံးခါထိုးပြီး ရှစ်နှစ်စိတ်ချလက်ချနေလိုက်ပါ။ ရှိနေပြီဆိုရင် ဘယ်အဆင့်ထိရောက်နေပြီလဲမေးပါ။ လုံးဝပျောက်ကင်းသည် အထိကုသလိုက်ပါ။
ဆေးဝါးများမှာသောက်ဆေးများဖြစ်သော်လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အလွန်များသောဆေးများ ဖြစ်သဖြင့် ဆရာဝန်၏ ညွန်ကြားချက်ဖြင့်သာသောက်သုံးရန်။
အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ Rh incompatibility မတူဖြစ်မှာကို တားဘို့အတွက် ဖြစ်တယ်။ မသိဘဲ အိမ်ထောင်ကျလို့ ကိုယ်ဝန်ရတဲ့အခါ ကလေးမှာ Hemolytic disease of the newborn-HDN ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Erythroblastosis fetalis လို့လဲခေါ်တယ်။ Antigen-antibodies reaction ခေါ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုကြောင့် ဖြစ်ရတယ်။ Maternal antibodies မိခင်ရဲ့ (အင်တီဘော်ဒီ) တွေက Placenta အချင်း ကတဆင့် ကလေးဆီ ကူးလာတယ်။
မိခင်ဟာ Rh negative မဖြစ်ရင် ဘာမှ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။ Rh -ve ဆိုတဲ့သဘောက သူ့ရဲ့ cells သွေးနီဥတွေ မျက်နှာပြင်မှာ D antigen ဒါမှမဟုတ် Rh factor မရှိတာ ဖြစ်တယ်။ မိန်းမက RH-ve နဲ့ ယောက်ျားက RH+ve ဖြစ်နေရင် သူတို့ကနေမွေးမဲ့ကလေးဟာ RH+ve ဖြစ်ဘို့ အခွင့်အလမ်း ၅ဝ% ရှိနိုင်တယ်။ အဲလို ဖြစ်နေမှ ပြဿနာတက်မယ်။ ကလေးရဲ့သွေးနဲ့ မိခင်သွေးတွေ အမျိုးမတူကြဘူး။
မွေးလာတဲ့ကလေးမှာ Erythroblastosis fetalis ရောဂါရမယ်ဆိုရင် Exchange transfusion သွေးလဲတာ လုပ်ရတယ်။ Hemolytic disease of the newborn မွေးစကလေးမှာ ဒီရောဂါဖြစ်မှာကို Intrauterine transfusion ဗိုက်ထဲကတည်းက သွေးလဲတာနဲ့ ကုနိုင်သေးတယ်။ Direct antiglobulin test (DAT, Direct Coomb's test ) စမ်းသပ်နည်းနဲ့ HDN ရှိ-မရှိစစ်ဆေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လက်မထပ်ခင် သွေးအုပ်စု တည့်-မတည့် သိဘို့ အရေးမကြီးဘူး ပြောတာဖြစ်တယ်။
• Rh negative မိခင်ကနေ Rh positive ကိုယ်ဝန်ကို ဆောင်နိုင်တယ်။ အဲဒီအခြေအနေမှာ မိခင်ရဲ့ Immune system ရောဂါပြီး စနစ်ကနေ ကလေးရဲ့ Rh positive red blood cells သွေးနီဥတွေကို ရန်သူလိုသဘောထားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် မိခင်ရဲ့သွေးထဲမှာ ဒါကိုဆန့်ကျင်တဲ့ Antibodies တွေထွက်လာပြီး တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်။ Sensitization ယဉ်ပါးအောင်လုပ်တာလို့ ဆေးစာနဲ့ခေါ်တယ်။
• ပထမကိုယ်ဝန်မှာ မဆိုးတာများတယ်။ ဒုတိယကလေးဆိုရင် RH+ve ဖြစ်ဘို့ ၂၅-၅ဝ% ရှိတယ်။ ပထမ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တုံးက သွေးထဲမှာ ဖြစ်နေခဲ့ပြီးသား Antibodies တွေဟာ များနေပြီမို့ ဒုတိကိုယ်ဝန်ဖြစ်နေတဲ့ အထဲက ကလေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး တိုက်ခိုက်တော့မယ်။
• Rh negative မိခင်မှာ Miscarriage ကိုယ်ဝန်ပျက်တာ၊ Ectopic pregnancy သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်တာ၊ Induced abortion ကိုယ်ဝန်ဖျက်တာတွေကနေ ကလေးရဲ့သွေးကလဲ အချင်းကတဆင့် မအေဆီရောက်နိုင်လို့ မအေမှာ Sensitization ဖြစ်မယ်။
• ကိုယ်ဝန်ရင့်ချိန်မှာ Amniocentesis ရေမြွာရည် ဖေါက်ယူ စစ်ဆေးလို့လဲ နဲနဲဖြစ်နိုင်သေးတယ်။
• မိခင်ရဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ Antibodies တွေကတိုက်ခိုက်ခံရတော့ သွေးနီဥတွေ နည်းပါးလို့ (Anemia) သွေးအားနည်းမယ်၊(Jaundice) အသားဝါရောဂါရမယ်၊ (Mental retardation ) ဦးနှောက်ညံ့မယ်၊ ကြာရင်( Heart failure) နှလုံးရောဂါရမယ်။
ကျန်းမာရေးဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ပြလိုက်တာပါ။ နောက်တစ်ခုက ပုံလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မည့်သို့သောသွေးအုပ်စုတွေက တခြားသွေးအုပ်စုတွေကို အစားသွင်းလို့ရတယ်ဆိုတာရယ်၊ မိခင်သွေးနဲ့ ဖခင်သွေးပေါင်းရင် ကလေးသွေးက ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြထားတဲ့ ဇယားလေးပါ။
ဖတ်ဖြစ်အောင် တော့ ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်။ တကယ်ကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ အတုလည်းယူသင့်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ကဗျာမဆန်တာ တွေလဲပါပါတယ်။ ကျွန်တော့မှာ နေစရာ အခန်းမရှိတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အခန်း ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အိပ်ခဲ့ရပါတယ်။ Coke ပုလင်းတွေကို လိုက်စုပြီး ပြန်အပ်လို့ရတဲ့ တစ်ပုလင်း ၅ ဆင့်ဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ဗိုက်ဖြည့်ရပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ ညတိုင်း ခုနှစ်မိုင် လမ်းလျှောက်ပြီး Hare Krishna ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းမှာ ထမင်းတနပ် အဝ သွားစားရပါတယ်။ စားလို့ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ စူးစမ်းလိုစိတ် နောက်လိုက်ရင်း၊ စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတာတွေကို လိုက်လုပ်ရင်း ကြုံကြိုက်ခဲ့တာ အတော်များများဟာ နောက်ပိုင်းမှာ အဖိုးမဖြတ် နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာလေးတစ်ခု ပေးပါရစေ။
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ ဆော့ဝဲလ်တွေ ဒေါင်းလို့ရတဲ့လင့်တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အများကြီးပဲ ဒီကောင်လေးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့ဆိုဒ်တွေ သွားစရာမလိုလောက်အောင်ပါပဲ။ အဟီးနောက်တာနော်။ များတော့များတယ်။ မိမိလိုချင်တဲ့နာမည်နဲ့ ကိုက်တယ်ဆိုရင် ဒေါင်းသွားလိုက်ပေါ့ဗျာ။ အစ်ကိုတစ်ယောက်ဆီက မလာတာ။ မသိတာတွေလည်းများကြီး ပဲ။ ဘာဆော့ဝဲလ်တွေမှန်း ကိုမသိဘူး။ တော်တော် ကိုကောင်းတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ ဒေါင်းလော့လင့်တွေကလည်းအများကြီးပဲ။ တစ်ခုမရရင်တစ်ခုပေါ့။ စိတ်ကြိုက်သာဒေါင်းပေတော့ ။ကျွန်တော်လည်းမအားသေးလို့။ ဒီဟာတွေအကုန်ဒေါင်းလော့ချပြီး သိမ်းထားရအုံးမယ်။ တကယ်လည်း အသုံးဝင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေပါပဲ။ ဒီထဲက သုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်သုံးပုံ သုံးနည်းလေးတွေပါ နောက်ကျရင်တင်ပေးပါ့မယ့်။ အခုတော့ အားရပါးရ ဒေါင်းလိုက်ပါအုံး။
Red Button_v4.0 (Portable)
Super Hide IP_v3.1.7.2
Keygen for Blumentals Soft
Button & Menu Maker_v2.3
Easy MP3 Downloader_v4
Xilisoft MP4 Converter_v6
USB Disk Security_v6
Button & Menu Maker_v2.11
SWF to Video (Sothink)
SWF To Video (iWisoft)
Ultra Surf v9.97
Windows7Manager 32 bit
ကဲဒီတစ်ခါတော့ ဟာသပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီပုံလေးတွေက ကျွန်တော် Facebook က Funny world မှာတွေ့ဖူးတဲ့ပုံလေးတွေပါ။ ဒါပေ့မယ့် ကျွန်တော်ယူတာက အဲဒီကတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားဆိုက်ကနေ ကူးယူထားပါတယ်။ မူရင်းဆိုက် ကိုလည်း အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ မူရင်းဆိုက်က မြန်မာဆိုက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီထဲက ကျွန်တော်သဘော ကျတာလေးတွေကို ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ပုံတွေနဲ့တင် မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်လည်း ဖော်ပြထားတဲ့ဆိုက်ကိုသာ သွားကြည့်ပါနော်။
ဇိပ်ပဲ ဆိုဖာလောက်တော့ သနားတယ်......